Wararka - Isbarbardhiga waxqabadka u dhexeeya mootada adeegga iyo mootada stepper
Maaddaama ay tahay nidaam xakameyn furan, mootada stepper waxay xiriir muhiim ah la leedahay tikniyoolajiyad casri ah oo lagu xakameeyo. Nidaamka hadda jira ee kontoroolka dhijitaalka ee gudaha, mootada stepper-ka ayaa si ballaaran loo adeegsadaa. Iyada oo muuqaalka kore ee nidaamka adeegga buuxa ee AC-ga ah, korantada adeegga ee 'AC servo motor' ayaa aad iyo aad looga dabaqaa nidaamka xakamaynta dhijitaalka ah. Si loola jaanqaado isbeddelka horumarka ee xakamaynta dhijitaalka ah, inta badan nidaamyada xakamaynta dhaqdhaqaaqa waxay korsadaan mootada korontada ku shaqaysa ama mootada adeegga buuxa ee 'AC servo motor' sida mashiinka fulinta. In kasta oo ay isku mid yihiin qaabka xakamaynta (wadnaha garaaca wadnaha iyo tilmaamaha jihada), way ku kala duwan yihiin waxqabadka iyo adeegsiga. Waxqabadka labadaba waa la barbardhigayaa.
Marka hore, Xakamaynta kaladuwan ee kaladuwan
Xaglaha tallaabada ee matoorka jaranjarooyinka isku dhafan ee labada waji ah guud ahaan waa 1.8 ° iyo 0.9 °, iyo tallaabada xagasha ee shanta waji ee matoorrada wadista guud ahaan waa 0.72 ° iyo 0.36 °. Waxa kale oo jira matoorro wax qabad sare leh oo loo qaybiyey dhinaca dambe xagalka si uu u yaraado. Tusaale ahaan, xagalka tallaabada xagjirka labada waji ee matoorka talaabadan ee ay soo saartay NEWKYE waxaa loo dejin karaa 1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 ° iyo 0.036 ° iyadoo la adeegsanayo furaha dial, kaas oo waa la jaan qaadayaa tallaabada Xaglaha labada waji iyo shan-waji mashiinka tallaabada isku-dhafka ah.
Xaqiijinta xakamaynta ee mootada adeegga waxaa damaanad qaadaya encoder-ka wareega dambe ee dhamaadka mashiinka mashiinka. Qaadashada NEWKYE oo ah mashiinka adeegga buuxa ee AC-ka ah tusaale ahaan, mootada leh heerka 2500 koodhka koodhka, garaaca garaaca wadnaha waa 360 ° / 8000 = 0.045 ° sababo la xiriira isticmaalka tiknoolajiyada laba jibbaaran ee darawalka. Mashiinka leh 17-bit encoder, darawalku wuxuu helayaa 131072 garaaca wadnaha hal mar, taas oo ah, u dhigma halbeeggeeda waa 360 ° / 131072 = 0.0027466 °, oo u dhiganta 1/655 garaaca wadnaha u dhigma matoor talaabo leh tallaabada Xaglaha 1.8 °.
Marka labaad, sifooyinka soo noqnoqoshada hooseeya way ka duwan yihiin
Xawaare hoose, mootada tillaabadu waxay u nugushahay gariirka hirarka-hooseeya. Inta jeer ee gariirku waxay la xiriirtaa xaaladda xamuulka iyo waxqabadka darawalka. Waxaa guud ahaan loo tixgeliyaa in inta jeer ee gariirku yahay kalabar inta jeer ee aan culeyska laga qaadin ee matoorka. Xaaladda gariirka hirarka-hooseeya ee ay go'aamiso mabda'a shaqada ee mashiinka stepper ayaa ah mid aan u fiicnayn howlaha caadiga ah ee mashiinka. Marka mootada jaranjarada ay ku shaqeyso xawaare yar, tikniyoolajiyad qoyan waa in guud ahaan loo adeegsadaa in looga gudbo ifafaalaha gariirka soo noqnoqda, sida ku darista mashiinka mootada, ama darawalka isticmaalka teknolojiyada hoosaadka.
Mashiinka adeegga ee 'AC servo motor' wuxuu u shaqeeyaa si habsami leh oo uusan gariirin xitaa xawaare hoose. Nidaamka loo yaqaan 'Ac servo system' oo leh shaqeynta xakamaynta miisaanka, wuxuu dabooli karaa la'aanta qalafsanaanta farsamada, nidaamkuna wuxuu leeyahay shaqeyn falanqeyn soo noqnoqota (FFT), wuxuu ogaan karaa barta farsamada ee gariirka, fududahay in la hagaajiyo nidaamka.
Seddexaad, astaamaha xilligan xaadirka ah waa ka duwan yahay
Xuddunta wax soo saarka ee mootada stepper ayaa hoos u dhaceysa kororka xawaaraha, waxayna hoos ugu dhici doontaa xawaare sare, sidaa darteed xawaareheeda shaqo ee ugu badan guud ahaan waa 300 ~ 600RPM. Mashiinka Ac servo waa soosaarid isdabajoog ah oo joogto ah, taas oo ah, waxay ku soo saari kartaa isugeyn lagu qiimeeyay xawaareheeda lagu qiimeeyay (guud ahaan 2000RPM ama 3000RPM), iyo soo saar awood joogto ah oo ka sareeya xawaaraha lagu qiimeeyay.
Tan afraad, awoodda xad-dhaafka ahi way ka duwan tahay
Mootada Stepper guud ahaan ma laha awood xad dhaaf ah. Mashiinka Ac servo wuxuu leeyahay awood xad dhaaf ah. Qaadashada nidaamka adeegga Sanyo AC tusaale ahaan, waxay leedahay karti xawaare dheereyn iyo culeys xad dhaaf ah. Xuddunta ugu sarreysa waa laba illaa saddex jeer oo ka mid ah xaddiga la qiimeeyay waxaana loo isticmaali karaa in looga adkaado isku-darka ma-guurtada ah ee culeyska firfircoonida bilowga. Sababtoo ah matoorka jaranjarooyinku ma laha awood culeys noocaas ah, si looga gudbo xilligan firfircoonida ee xulashada, badanaa waxaa lagama maarmaan ah in lagu xusho mootada dherer weyn, mashiinkuna uma baahna culeys saa u weyn inta lagu jiro hawlgalka caadiga ah, sidaa darteed ifafaale qashinka Xuddunta ayaa dhacda.
Shanaad, Waxqabadka hawlgalka ee kala duwan
Mashiinka tallaabada waxaa gacanta ku haya kantaroolka furan. Haddii soo noqnoqodka bilowgu aad u sarreeyo ama rarku aad u badan yahay, way fududahay in lumiyo tallaabo ama istaag; haddii xawaaruhu aad u sarreeyo, way fududahay in la dhaafiyo markii la joojinayo. Sidaa darteed, si loo hubiyo saxnaanta xakamaynta, dhibaatada kor u kaca xawaaraha iyo hoos u dhaca xawaaraha waa in si fiican loola dhaqmaa. Nidaamka wadista adeegga ee 'Ac servo drive' waa xakameyn-loop xiran. Darawalku wuxuu si toos ah u tijaabin karaa astaamaha jawaab celinta ee codeeyaha mootada. Qaybta gudaha waxay ka kooban tahay giraanta booska iyo giraanta xawaaraha.
Lixaad, Waxqabadka jawaabta xawaaraha kala duwan
Waxay ku qaadataa 200 ~ 400 milliseconds mootada tallaabada si ay uga deg dejiso nasashada illaa xawaaraha shaqada (guud ahaan boqolaal kacdoon daqiiqaddii). Waxqabadka dardargelinta nidaamka adeegga 'AC servo' waa mid wanaagsan. Qaadashada NEWKYE 400W AC servo motor tusaale ahaan, waxay kaliya qaadataa dhowr milliseconds si loo dardar geliyo nasashada ilaa xawaaraha lagu qiimeeyay ee 3000RPM, kaas oo loo adeegsan karo munaasabadaha xakamaynta ee u baahan bilawga iyo joojinta degdega ah.
Isku soo wada duuboo, nidaamka adeegga ee AC wuxuu ka sarreeyaa mootada stepper ee dhinacyada waxqabadka badan. Si kastaba ha noqotee, mootada gawaarida waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu fuliyo mootooyinka mararka qaarkood baahi yar. Sidaa darteed, habka naqshadeynta nidaamka xakamaynta si loo tixgeliyo shuruudaha xakamaynta, qiimaha iyo arrimo kale, dooro matoorka xakamaynta ku habboon.
Gawaarida Stepper Hybrid, 220 Volt Ac Howlsocodsiinta Motor, Howlsocodsiiyaha gawaarida gawaarida, 6 Wire Stepper Motor, Ac Stepper Motor, Xidhan Loop Stepper Motor Driver,